မိနျးမယူသှားတဲ့ သရုပျဆောငျနတေိုးကို ဗိုလျမှူးကွီးမငျးမျောကှနျး ဆူပွီ – Alanzayar
မိနျးမယူသှားတဲ့ သရုပျဆောငျနတေိုးကို ဗိုလျမှူးကွီးမငျးမျောကှနျး ဆူပွီ
ယနေ့ လူပွောမြားနသေညျ့ ရခိုငျတိုငျးရငျးသား ရုပျရှငျသရုပျဆောငျ မငျးသားကွီး နတေိုး (ခ) ကိုနလေငျးအောငျနှငျ့ မသဲစုမွတျရှတေို့၏ ‌မင်ျဂလာဦးဆှမျးကြှေးပုံမြားကိုတှတှေ့တေ့ော့ နှငျးဆီတဈဖှဲ့လုံးရဲ့ တဈပှငျ့ထဲတောထဲမှာပှငျ့နတေဲ့ ပွညျသူ့အခဈြတျော စကစကို ဒဲ့ရှံနတေဲ့ သရုပျဆောငျမငျးမျောကှနျး ကတော့ သူနဲ့လုပျဖျေါကိုငျဖကျ
ညီကိုရငျးသဖှယျခဈြခငျကွတဲ့ သရုပျဆောငျအကယျဒမီနတေိုး အိမျထောငျပွုသှားတာကို မငျးမျောကှနျး မဆူသေးဘူး မကွာဘူးထငျပါတယျ ပွညျသူအခဈြတျော မငျးမျောကှနျးက ကိုနတေိုးကိုဆူမလား?ခြီးကြူးစကားတှေ
ပွောမလား? ဆိုတာ ဒါမဲ့ ကိုနတေိုး ယူတဲ့အမြိုးသမီးက စကစ ကိူထောကျခံသူတဈယောကျဆိုတော့ ကိုမငျးမျောကှနျးကတော့ ဆူတော့မှာပါ ဒါမဲ့လညျး ကိူနတေိုးက ရခိုငျလူမြိုးဆိုတာ ကိုမငျးမျောကှနျး လညျး သိပါတယျ
အဲ့တော့ ပွညျသူခဈြပရိသတျနှဈယောကျကို တို့ပွညျသူတှစေောငျ့ကွညျ့ကွရအောငျနျော မင်ျဂလာအပေါငျးနဲ့ပွညျ့စုံကွပါစေ ပွညျသူတှလေိုခငျြတောငျးတာနတေဲ့ စဈအာဏာရှငျလညျးကဆြုံးပါစေ ကပျရောဂါဘေးမှလညျးကငျးဝေးကွပါစရှေငျ့(ဓါတ်ပုံ – Facebook) Credit
မိန်းမယူသွားတဲ့ သရုပ်ဆောင်နေတိုးကို ဗိုလ်မှူးကြီးမင်းမော်ကွန်း ဆူပြီ
ယနေ့ လူပြောများနေသည့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် မင်းသားကြီး နေတိုး (ခ) ကိုနေလင်းအောင်နှင့် မသဲစုမြတ်ရွှေတို့၏ ‌မင်္ဂလာဦးဆွမ်းကျွေးပုံများကိုတွေ့တွေ့တော့ နှင်းဆီတစ်ဖွဲ့လုံးရဲ့ တစ်ပွင့်ထဲတောထဲမှာပွင့်နေတဲ့ ပြည်သူ့အချစ်တော် စကစကို ဒဲ့ရွံနေတဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်း ကတော့ သူနဲ့လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်
ညီကိုရင်းသဖွယ်ချစ်ခင်ကြတဲ့ သရုပ်ဆောင်အကယ်ဒမီနေတိုး အိမ်ထောင်ပြုသွားတာကို မင်းမော်ကွန်း မဆူသေးဘူး မကြာဘူးထင်ပါတယ် ပြည်သူအချစ်တော် မင်းမော်ကွန်းက ကိုနေတိုးကိုဆူမလား?ချီးကျူးစကားတွေ
ပြောမလား? ဆိုတာ ဒါမဲ့ ကိုနေတိုး ယူတဲ့အမျိုးသမီးက စကစ ကိူထောက်ခံသူတစ်ယောက်ဆိုတော့ ကိုမင်းမော်ကွန်းကတော့ ဆူတော့မှာပါ ဒါမဲ့လည်း ကိူနေတိုးက ရခိုင်လူမျိုးဆိုတာ ကိုမင်းမော်ကွန်း လည်း သိပါတယ်
အဲ့တော့ ပြည်သူချစ်ပရိသတ်နှစ်ယောက်ကို တို့ပြည်သူတွေစောင့်ကြည့်ကြရအောင်နော် မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ ပြည်သူတွေလိုချင်တောင်းတာနေတဲ့ စစ်အာဏာရှင်လည်းကျဆုံးပါစေ ကပ်ရောဂါဘေးမှလည်းကင်းဝေးကြပါစေရှင့်(ဓါတ္ပုံ – Facebook) Credit
Previous Article မိမိတို့၏ တစ်နေ့တာ မှာ ဖုန်းလုံးဝ မသုံးသင့်တဲ့အချိန်များ
Next Article စကားကြှံသှားလို့လကျစဖြောကျခံရတော့မှာလား…ဇျောမဲလုံး…